Anọ-na-otu ọgịrịga nke mgbanwe nke AC convergence ike components AMJ2-4003H / 1003HX4 - China Shanghai IPKIS
Okpomọkụ ma na iru mmiri njikwa
Onye ọrụ Guide
Anọ-na-otu ọgịrịga nke mgbanwe nke AC convergence ike components AMJ2-4003H / 1003HX4
Isi AMJ1 busbar ike akụrụngwa bụ a modular ejikọta akụrụngwa e site IPKIS atọ-adọ multi-alaka alaka ugbu a mwekota. Ọdịdị bụ kọmpat na ndị mara mma, na njikọ bụ adaba na nchebe. Site modular imewe, na mgbagwoju anya na ime The n'ikewa akara bụ mfe ka nanị ikesiike na a sikruuokwomoto. N'otu oge, ndị modul nwere ike spliced ​​dị ka n'ezie alaka mkpa, nke ukwuu na-azọpụta ọrụ na-eri na ohere na-eri, na connec ...
AMJ1 busbar ike akụrụngwa bụ a modular ejikọta akụrụngwa e site IPKIS atọ-adọ multi-alaka alaka ugbu a mwekota. Ọdịdị bụ kọmpat na ndị mara mma, na njikọ bụ adaba na nchebe. Site modular imewe, na mgbagwoju anya na ime The n'ikewa akara bụ mfe ka nanị ikesiike na a sikruuokwomoto. N'otu oge, ndị modul nwere ike spliced ​​dị ka n'ezie alaka mkpa, nke ukwuu na-azọpụta ọrụ na-eri na ohere na-eri, na njikọ bụ mara mma nke ukwuu.
Soft njikọ Jiri adụ ọla kọpa Ogwe jikọọ switches na busbars
Ike njikọ na-mere site na iji ọla kọpa Ogwe na busbars
Specific akụkụ dị ka n'ezie mkpa iji chọpụta nkọwa, biko na-enye anyị na-eji nke ina gbara ajụjụ.
Ileba size: 630 * 214 * 92
Ike ụgbọ ala AMJ2integrated busbar
Main mgba ọkụ 400A atọ-adọ kpụrụ ikpe mgba ọkụ
Sub-mgba ọkụ 100A atọ-adọ kpụrụ ikpe mgba ọkụ
Main njikọ soft njikọ
Sub-njikọ soft njikọ
● The mbụ iferi ọla kọpa n'apata n'ime a modular mgba ọkụ arụnyere na.
● ngwaahịa nwere ike mere ndokwa na a dịgasị iche iche: ọgịrịga, ọzọ aga na, si na-esote.
● Anyị modul nwere ike ịbụ ihe niile adụ n'usoro n'apata, mgba ọkụ ozugbo n'elu modul, mgbanwe spacing, ukwuu mbenata Chassis ohere.
● Anyị isi n'usoro na sub-ahiri akpan iji mwekota Ọdịdị, adabara dị iche iche nkọwa nke ọla kọpa alternately n'apata, ịgbanwee diversification ndokwa, izute iche iche mkpa nke ndị ahịa.
● echebe shei na PA66 ihe onwunwe.
● Isi Ahịrị nke elu-edu ọla kọpa.
● ụgbọ ala na-adịghị adịte idi ugbu a (Icw): 18KA n'elu;
● abata njikọ: atọ-adọ / anọ na-adọ 250A ~ 800A, juu ma ọ bụ ike n'usoro;
● busbar: elu conductivity ọla kọpa nickel plating;
● echebe shei: PA66;
● busbar ọkpụrụkpụ: gosiri na 4-10mm;
● alaka njikọ: karịa abụọ-adọ atọ-adọ / karịa 63A, juu ma ọ bụ ike n'usoro.
Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd. na-elekwasị anya integrated combiner igbe usoro na ancillary ụlọ ọrụ, eletriki ike nkesa zuru tent nke Ọdụdọ njikọ technology nnyocha na mmepe na ngwa nke nnyocha sayensị ego afọ site n'afọ, patent ngwa mma e guzobere a ọma gburugburu, nnyocha sayensị mgbanwe bụ obi ụtọ, Shanghai Tech enterprise; ụlọ ọrụ ahụ bụ mma na ọrụ na oru uru maka usoro ụlọ ọrụ na-enye ọkụ na njikọ ngwọta, na anyị ọkachamara, na-adọ na ngwa ngwa imekọ ihe ọnụ, na ike ndị ọzọ uru maka ndị ahịa, na ndị ahịa na-etolite a nso na-akwado mmekọrịta, site na ọtụtụ afọ Ọ kpụrụ a pụrụ iche azụmahịa nlereanya na eguzobewo ebe obibi gburugburu na akara na ike mmepe nke ụlọ ọrụ. N'okpuru ugbu a ndabere nke overcapacity, nkà na ụzụ upgrading na ulo oru mwekota, ọ dị mkpa ka ifịk ifịk inyocha echiche ọhụrụ maka lanarị na mmepe nke obere ụlọ ọrụ.
Product àgwà dị anyị kaadị azụmahịa, n'ihi na àgwà anyị na-ajụ mediocrity. Anyị na-enwe nchegbu banyere nkọwa, aga n'ihu mma, onye a akwụkwọ, ọ bụ onye nnọchiteanya nke niile IPKISer si arụ ọrụ ego.
Previous: Back-n'ịnyịnya anọ-na-otu photovoltaic AC convergence ike components AMJ1-2503S / 0633SX4
Osote: Dabere isii n'ime a photovoltaic AC convergence ike components AMJ2-4003H / 1003HX6
180a Ọdụdọ Nkesa Box
DC Ọdụdọ Nkesa Box
Pv Hazienụ Combiner
Pv Hazienụ Combiner Box
Pv Hazienụ eriri Combiner Box
Pv Panel eriri Box
Pv anyanwụ ogwe Combiner Box
Solar Ip65 Combiner igbe
Solar modul eriri Box
anyanwụ ogwe DC Combiner Box
Solar eriri Combiner Box
Back-n'ịnyịnya n'okpuru ụzọ ise n'ime a photovo ...
Nghọta ala n'okporo ụzọ atọ n'ime a PV AC conver ...
Adabere isii n'ime a photovoltaic AC convergence Int ...
Back-n'ịnyịnya anọ-na-otu photovoltaic AC conver ...
Back-ndokwasa abụọ-na-otu photovoltaic AC converg ...
Okwu: Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd